We Fight We Win. -- " More than Media ": "လက်ပံတောင်းတောင်အ ရေးဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲ" (နယူးရောက်မြို.)
"လက်ပံတောင်းတောင်အ ရေးဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲ" (နယူးရောက်မြို.)
မီးလောင်တိုက်သွင်းပြီး ဖြိုခွဲဖျက်စီးခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်အား ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချတာင်းဆိုပွဲကို
ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ နယူးရောက်မြို မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှေတွင် မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေး
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ့ရသော ရဟန်းသံဃာများအား အတိအလင်း ဝန်ချတောင်းပန်ရန်န.ဲ နောက်နောင်
ထိုက.ဲသ.ို မပြုလုပ် ရန့် ၊ဦးပိုင်ကုမဏီ ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ ၊ လက်ပန်တောင်းစီမံကိန်းကို ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းရန်၊
မတရား ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားသူများအားလုံး ယခု ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရန် စတဲ့တောင်းဆုိုချက်တွေကို ဆ န္ဒ ပြ တောင်း ဆိုခဲကြသည်. ။
မင်းတို့ ဆန္ဒပြလို့ အစိုးရက ဘယ်နှစ်ခါ လိုက်လျောဘူးသလဲ..